अचम्मैका योगी! जसले ४ महिनाकी छोरीसहित अपाङ्ग महिलालाई स्विकारेर बिहे गरे (भिडियो) – Etajakhabar
अचम्मैका योगी! जसले ४ महिनाकी छोरीसहित अपाङ्ग महिलालाई स्विकारेर बिहे गरे (भिडियो)
रञ्जन अधिकारी ५२ वर्षका हरिनाथ योगीले आफ्नो घर दाङ घोराही नगरपालिका १० भएको र चार वर्षअघि पोखरा आएको सुनाए । बाबा भन्दा झण्डै आधा उमेर कम कमलाको विगत भने तीतो छ । स्याङ्जा खिलुङदेउराली घर भएकी २९ वर्षीया कमलाको जन्मदेखि नै बायाँ गोडा चल्दैनन् । यताउति हिँड्न पनि वैशाखी चाहिन्छ । घरतिरै रहेका बेला एउटा मजदुरले उनलाई बिहे गर्छु भन्दै भगाए । उनलाई अझै पनि आफ्नो पहिलो श्रीमान्को नाम थर थाहा छैन । ‘खोई पर्वत कुश्माका रे । राम्री केटी देख्यो । तिम्रो खुट्टा नि छैन । म लैजान्छु पाल्छु भनेर लगेछन् ।’ — योगीले रहस्य खोले– ‘के को पाल्नु ? पोखरा ल्याएपछि पृथ्वीचोकमा बसपार्कतिर माग्न पठाउने अनि आफू मोज गर्न थालेछन् ।’ योगीको कुरा नसकिँदै कमलाले थपिन् – ‘पोखराबाट काठमाण्डु लगेर स्वयम्भूमा माग्न बस्न भन्यो । मैले बटुलेको सबै पैसा रक्सी खान्थ्यो । दिनदिनै कुट्थ्यो । पछि रक्सी खाँदा खाँदै म¥यो ।’
प्रकाशित मिति: शुक्रबार, पौष २२, २०७३ समय: १३:०८:२४